General Knowledge Archives - Page2of 80 - Lifestyle Myanmar
ဖုန်းတွေဟာ အချက်အလက်တွေကို ရယူဖို့ ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာထက်ပိုလာပါတယ်။ သင်ကိုယ်တိုင် ဖုန်းတစ်လုံးမရှိရင် မနေနိုင်ဘူး နေ့တိုင်း ဖုန်းနဲ့အချိန်ကုန် အိပ်လည်းဖုန်း စားလည်းဖုန်း သင့်ဘဝရဲ့မရှိမဖြစ်အရာတစ်ခုလို ခံစားနေရပီဆို သင်ဖုန်းအစွဲလွန်ရောဂါရနေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Nomophobiaလို့ခေါ်တဲ့ no mobile phone phobia ဆိုတဲ့ရောဂါကို လူတော်တော်များများရနေကြပြီလို့ဆိုပါတယ်။ နယူးယောက်တိုင််မး သတင်းစာအဆိုအရ ဆယ်ကျော်သက်တွေနဲ့လူကြီးတွေက သူတို့ဖုန်းတွေကို တစ်နေ့မှာ အကြိမ်လောက်ကြည့်ကြပြီး စာသားမက်ဆေ့ ၁၁၀ ခန့်ပေးပို့တတ်ကြပါတယ်။...
စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်တဲ့အခါ ပြောမိပြောရာတွေ ပြောလိုက်ရင် အမှားပါတတ်ပါတယ်။ မိမိရဲ့မထိန်းနိုင်တဲ့ ဒေါသကြောင့် သူငယ်ချင်းသံယောဇဉ်၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် သံယောဇဉ်၊ ဆွေးမျိုးရင်းချာတွေနဲ့လည်း မခေါ်နိုင်မပြောနိုင် ဖြစ်တာတွေလည်း အများကြီးပါပဲ။ ဒါဆိုရင် ဒေါသကြီးပြီး ဝုန်းဒိုင်းကြဲတတ်သူတွေအတွက် ဒေါသကို ဘယ်လိုထိန်းချုပ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ အချက် ၇ ချက်ကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ ၁။ ဒေါသကို ရေးချပြီး ဖျက်ဆီးလိုက်ပါ သင့်ကိုဒေါသဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို စာရွက်ပေါ်မှာ အသေးစိတ်ချရေးလိုက်ပါ။...
ကလေးငယ်တွေကို နည်းပညာနဲ့ ထိတွေ့ခွင့်မပေးမှီ နည်းပညာရဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကို သိရှိနားလည်ထားတာက ကလေးငယ်တွေအတွက် ကောင်းမွန်ပါလိမ့်မယ်။ ပြဿနာတွေကို မကြုံတွေ့ရအောင် ကြိုတင်ရှောင်ရှားတာနဲ့ ကာကွယ်ထားတာက အသင့်တော်ဆုံးသောနည်းလမ်းလည်းဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်မှာ smart devices များသည် ကလေးငယ်တွေနဲ့ ဆယ်ကျော်သက်များရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝအစိတ်အပိုင်းလိုဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ မိဘများအနေနဲ့ နည်းပညာရဲ့ ဆိုးကျိုးများကိုပိုပြီး စိုးရိမ်သင့်ပါတယ်။ နည်းပညာရဲ့ ကောင်းကျိုးတွေများစွာရှိပေမယ့် ကလေးငယ်တွေရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကာလအတွင်း ရှုပ်ထွေးမှုတွေကို...
ဦးနှောက်ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ အစားအစာ ၆ မျိုး
ကျနော်တို့ရဲ့ ဦးနှောက်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အရေးကြီးဆုံးအရာတခုဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ လှုပ်ရှားမှု၊ အတွေးတွေ၊ ခံစားချက်တွေ၊ အမှတ်တရတွေအားလုံးကို ဦးနှောက်က ထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဦးနှောက်ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေကို မထိခိုက်စေဖို့အတွက် ရှောင်ကြဉ်သင့်တဲ့ အစားအစာတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ အဆီပါဝင်မှုများတဲ့ အစားအစာများ အဆီဓါတ်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လုံးဝမကောင်းတဲ့အရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အသားနဲ့ နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေမှာ ပါဝင်တဲ့အဆီဓါတ်ကတော့ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အကျိုးဖြစ်စေပေမယ့် hydrogenated...
ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပုံပြင်တပုဒ်ရှိပါတယ်။ သို့သော် အဲ့ဒီ့ပုံပြင်ကိုဘယ်သူရေးခဲ့မှန်းလဲမသိသလို ပုံပြင်ရဲ့အမည်နာမကိုလဲ ကျွန်တော်မသိပါဘူး။ ဒီပုံပြင်လေးရဲ့ဇစ်မြစ်ကို ဘယ်နေရာမှာရှာဖွေရမလဲဆိုတာလဲ ကျွန်တော်မသိပါဘူး။ ကျွန်တော့်ဆီကို မသိခြင်းတွေနဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့သလို ကျွန်တော်ကလဲ မသိခြင်းတွေနဲ့အတူ သင်တို့ဆီ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးလိုက်တာပါပဲ။ ဒီအပေါ်မှာ သင့်စိတ်ကြိုက်အမည်နာမတွေ တပ်ခွင့်ရှိပါတယ်။ သင်လိုချင်သလောက် ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခွင့်လဲရှိပါတယ်။ တကယ်တော့ ပုံပြင်တပုဒ်ဟာ ပုံပြင်တပုဒ်ပါပဲ။ ကျွန်တော့အနေနဲ့ကတော့ ဒီပုံပြင်ကိုရေးသူ၊ အမည်နာမ၊ ဘယ်ပုံဘယ်နည်းဖြစ်လာသလဲစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိဖို့ကြိုးစားတာထက် ကျွန်တော်လက်ရှိခံစားလို့ရတဲ့ ပုံပြင်တပုဒ်ကဘာအကြောင်းအရာကို ပြောနေသလဲ၊ ဒီထဲကဘာတွေသိရှိနိုင်မလဲဆိုတာကို...
သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေထဲက အရက်စက်ဆုံးသော အမျိုးသမီးလူသတ်သမားများ အပိုင်း ( ၂ )
10. ဗီယင်နာမြို့က သေမင်းနတ်သမီးလို့ခေါ်တဲ့ Waltraud Wagner သူမနဲ့ အဖော်သုံးဦးတို့ဟာ ၁၉၈၃ခုနှစ်မှ ၁၉၈၉ခုနှစ်အထိ၊ ခြောက်နှစ်ကျော်အတွင်း လူသတ်မှုပေါင်း ၄၉ မှုကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ ဝန်ခံခဲ့ပေမယ့် လူဦးရေ ၂၀၀ လောက်ဟာ သူမတို့လက်ချက်နဲ့ သေဆုံးခဲ့ဖွယ်ရှိတယ်လို့ ထင်မြင်ယူဆကြပါတယ်။ သူမဟာ ဩစတြီးယားနိုင်ငံ၊ ဗီယင်နာမြို့ လိန့်ဇ်ဆေးရုံမှာ သူနာပြုလက်ထောက်အဖြစ် အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီး ၁၉၈၃ ခုနှစ်၊ သူမအသက် ၂၃နှစ်အရွယ်မှာ...
သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေထဲက အရက်စက်ဆုံးသော အမျိုးသမီးလူသတ်သမားများ အပိုင်း(၁)
5. ဂျာမန်စိတ္တဇ လူသတ်သမ Gesina Margaretha Gottfried သူမရဲ့ သတ်ဖြတ်ခြင်းခံရသူတွေထဲမှာ သူမရဲ့ မိဘနှစ်ပါး၊ သူမရဲ့ ခင်ပွန်းနှစ်ယောက်၊ စေ့စပ်ထားသူနဲ့ သူမရဲ့ ကလေးတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ သူမဟာ အဲဒီလို လူသတ်မှုတွေကို ကျူးလွန်နေပေမယ့် သူမအပေါ် တဦးတယောက်ကမှ သံသယမဝင်အောင်နေထိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး သူမရဲ့ သားကောင်တွေစားမယ့် အစားအစာတွေထဲမှာ ကြွက်သတ်ဆေးကိုရောကျွေးပြီး နေမကောင်းဖြစ်စေပါတယ်။ နေမကောင်းဖြစ်ချိန်မှာတော့ အကောင်းမွန်ဆုံးပြုစုစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးပြီး...
"သား ဘာလို့ဆေးရမှာလဲ? ကြည့်လေ…သားလက်က သန့်နေတာပဲ"- ဒါက သင့်ကလေးကို လက်ဆေးဖို့ပြောတဲ့အခါတိုင်း သူ့ရဲ့ပုံမှန်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ရောဂါပိုးရဲ့ အယူအဆကို ကလေးတွေ နားမလည်လို့ပါ။ ကလေးတွေကို ရောဂါပိုးတွေအကြောင်း သင်ကြားပေးခြင်းနှင့် တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုအကြောင်း ရှင်းပြပေးခြင်းက သူတို့ကို ကျန်းမာအောင် ထိန်းသိမ်းတတ်စေဖို့ လွယ်ကူစေပါတယ်။ ကလေးတွေကို ရောဂါပိုးအကြောင်း ဘယ်လိုရှင်းပြမလဲ? ဒါက မလွယ်ကူပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ကလေးတွေကို ပိုးမွှားအမျိုးမျိုးအကြောင်းနှင့် ထိုပိုးမွှားတွေရဲ့...
သင့်နာမည်အစ အက္ခရာက ပြောပြနေတဲ့ သင့်အကြောင်းများ
ရာသီခွင်တွေ လက်ဖဝါးပေါ်က လက္ခဏာတွေလို သင့်အကြောင်းကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပြောပြနိုင်တဲ့အရာက သင့်နာမည်အစပါပဲတဲ့။ သင့်နာမည်က ဘာအက္ခရာနဲ့စလဲ? သင့်နာမည်အစက သင့်အကြောင်းအချို့ကို ပြောပြပါလိမ့်မယ် ကဲဖတ်ကြည့်ရအောင်.. A သင့်နာမည်အစက Aနဲ့စတယ်ဆိုရင် သင်ဟာ အရမ်းကြီးစိတ်ကူးယဉ်ဆန်သူမဟုတ်ပဲ လုပ်ရပ်တွေမှာ ပိုပီး စိတ်ဝင်စားသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်မြင်တဲ့အရာကို လိုချင်ရင် တစ်ကယ်ရအောင် သင်ကိုယ်တိုင် လုပ်တတ်တယ်။ ပရောပရည်မလုပ်တတ်ဘူး၊ ချစ်ဖို့ကောင်းတယ် အနေအေးတယ် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဒဲ့ပြောတတ်တယ်။...
ညဖက်ဆိုတော်ရုံအိပ်မပျော်တတ်သူများအတွက် ၂ မိနစ်အတွင်း အိပ်ပျော်စေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းများ
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ၊ ခေါင်းအုံးပေါ် ခေါင်းချလိုက်တာနဲ့ ချက်ချင်းအိပ်ပျော်သွားတဲ့သူတွေကို လူတိုင်းအားကျမိကြမှာပဲနော်။ အဲ့ဒီလိုချက်ချင်းအိပ်ပျော်ဖို့အတွက် နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းလေးတွေကို လိုက်လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ညဘက်မှာ ဇီးကွက်ကြီးတွေလိုဖြစ်စရာမလိုတော့ဘဲ ချက်ချင်းအိပ်ပျော်စေမှာပါ။ အဆင့် ၁ မျက်နှာကြွက်သား၊ လည်ပင်းကြွက်သား၊ မေးရိုးနဲ့ မျက်လုံးနားတစ်ဝိုက်က ကြွက်သားတွေအကုန်လုံးကို ဖြေလျော့ထားပါ။ အဆင့် ၂ ပုခုံးကို နိမ့်နိုင်သမျှ နိမ့်ထားပေးပြီး လက်မောင်းအကြောတွေကိုလည်း ဖြေလျော့ထားကာ မိမိလက်ကို ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ဆီမှာ...